एभरेस्ट प्रिमियर लिग : पोखरालाई जितका लागि १२० रनको मध्यम लक्ष्य - GalaxyPati
के हो जग्गाको हालसाविक भनेको ? किन र कसरी गर्ने ?
के हो घरबाटो सिफारिस ? किन जरूरी पर्छ?
एभरेस्ट प्रिमियर लिग : पोखरालाई जितका लागि १२० रनको मध्यम लक्ष्य
२०७८ आश्विन २१, बिहीबार १५:५४
२१ , असोज । कप्तान शरद भेषावकरको अविजित ३२ रनप्रेरित भैरहवा ग्लाडियटर्सले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) ट्वान्टी–२० क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायर्समा पोखरा राइनोजलाई जितका लािग १२० रनको लक्ष्य दिएको छ ।बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङका लागि निम्त्याइएको भैरहवाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ११९ रन बनायो ।
भैरहवाले ९.५ ओभरमा ५१ रन बनाउँदा पाँच विकेट गुमाएको थियो । त्यसपछि शरदले आरिफ शेखसँग छैटौँ विकेटका लागि ४१ रनको साझेदारी गरेका थिए । आरिफले २७ रन बनाए । त्यसपछि शरदले धम्मिका प्रसादसँग सातौँ विकेटका लागि २७ रनको अविजित साझेदारी गरेका थिए ।
शरदले ३३ बलमा दुई चौका र एक छक्कासहित अविजित ३२ रन बनाए । ओपनर रोहितकुमार पौडेलले १८, प्रदीप ऐरीले ११ र उपुल थरंगाले १० रन जोडे ।पोखराका किशोर महतो र सहन राचिगेले समान दुई विकेट लिए भने नन्दन यादव र एसेला गुनरत्नेले एक/एक विकेट लिए । विजयी टोलीले फाइनलमा चितवन टाइगर्सविरुद्ध खेल्नेछ ।